Xisbiga ANC Oo Maanta Go'aan Ka Gaadhaya Mustaqbalka Madaxweynaha Dalka Koonfur Afrika
Tuesday February 13, 2018 - 09:23:30 in Wararka by Reporter Burco
Hargeysa(QorilugudNews)- Hogaamiyaha xisbiga ANC Cyril Ramaphosa ayaa xaqiijiyay in xisbiga ay maanta go’aan ka gaaridoonaan mutaqbalka madaxwayne Zuma, Waxa uu si cad ugu sheegay taageerayaasha ANC in haddii madaxwayne Zuma uusan xilka ka dagin laga dalban doono in uu iscasilomarka kulanka xisbiga ee maanta galinka danbe la qabanayo.
Madaxwayne Zuma ayaa wajahaya dhowr dacwadood oo la xiriira musuqmaasuq, waxaana Ramaphosa oo lagu wado in uu isaga badalo uusan u muujin wax naxariis ah, Xusidda uu Ramaphosa khudbadiisa ku xusay magaca Mandela ayaa ku soo beegmaysa xilli Koonfur Afrika laga xusayo dhalashadii Mandela.
Waxaa hadda laga joogaa 28 sano markii xabsiga laga siidaayay halyeeygii u soo halgamay Koonfur Afrika islamarkana uu khudbadiisii ugu horreysay ka jeediyay magaalada Cape Town. Cyril Ramaphosa ayaa xilligaasi barbar taagnaa Mandela? Maanta isla goobtii waxa uu soo jeediyay in Koonfur Afrika ay sharaf u tahay in ay bilaawdo waqti cusub ka dib waxa ay dad badan u arkaan in ay tahay fadeexado iyo niyad jab lala kulmay xilliga madaxwaynanimada Zuma.